धार्मिक चाड र कुसस्कृति
Created on Tuesday, 30 October 2012 01:01
हिजो आज चाड पर्बको रौनक्ता यत्रतत्र वातावरणमा छ्रपस्टीरहदा सामाजिक सन्जाल फेशबुकको भित्ता भरी रगताम्या बोका, खसी, रागो, सुगुर, भेडा, बाख्रो अनी कुखुरा, हास र परेवाको फोटाहरूले मात्र सिङ्गारिएको छ । मलाई भने हत्या गरिएको जन्तु वा पन्क्षीको रगत देखे पछि रिंगटा लागेर आउछ खैर यो अधिकाम्स नेपालिको सस्कार र धर्मसँग गासिएको पक्ष हो । अहो !हामि नेपालिको सस्कार अनी धर्म मान्ने प्रथा देख्दा कहीले काहि घोरिएर भुइतिर लत्रिन मन लाग्छ । होईन कस्तो सस्कार, के सस्कार, के को लागी सस्कार, कुन उपयोगी सस्कार अनी कुन घातक सस्कार l हामी अन्धाभक्ती हौ भन्दा अतियुक्ती नहोला । परापुर्ब कालदेखि चली आएको प्रथा, सस्कार बचाउनै पर्छ भनेर कतिपय घातक, बेफाइदाजनक सस्कारको पछाडि दौडिरहनु जरुरी लाग्दैन । हरेक चिज वा बस्तु चलायमान छ, परिबर्तन्शिल छ त्यस्तै सस्कार अनी प्रथा पनि । त्यसलाई समय अनुसार त्यसको सत्य र वास्तबिक पक्षलाई निरन्तर्ता दिदै सम्सोधन गरिनु पनि पर्छ । हाम्रा पुर्खाले जानअन्जान अनी उनीहरूको समय सापेक्षताको लागि बिभिन्न कारणवस प्रथा र सस्कार बसाए होलान् । ती मध्ये कतिपय सस्कार र चलन २१ औ शताब्दीमा प्रबेश गरिसक्दा परिबेस अनुरुप अनुकुल नभएको महसुस हुन्छ l जो हामि आफैलाई निरन्तर्ता दीइरहनु अप्ठ्यारो लागिरहेको छ l फेरि पनि सामाजिक बहिस्करणको डर र त्रासले अङ्गिकार गरिरहेकै छौ । कतिपय ठाउमा त्यस्ता ब्यक्ति जो सस्कार समय अनुकुल परिमार्जन गर्नु पर्छ भन्ने लाई गाऊका बुढापाकाहरू मिली ठेकान पनि लगाएका छन् ।
बिषय प्रबेश गरौ
कुरो यहाँ मैले उजागर गर्न खोजेको के भन्देखिन, पशु बध गरि भगवान मान्ने, आफ्नो पुर्खालाई पुज्ने देखि हरेक जसो सस्कार अनि कर्म कान्ड गर्दा निर्दोस पशुलाई नै उपयोग गरिन्छ । बिशेष गरि यो कुप्रथाले जरो गाडेको छ आदिबासी जनजाति समाजमा । यहाँ उल्लेख गरिरहनु नपर्ला कसरी कुन कुन सस्कारमा पशु वा पक्षीलाई उपयोग गरिन्छ भनेर । हामि बुझेर, जानेर पनि मुक्दर्शक बनी ती कार्यहरूलाई निरन्तर्ता दीइरहेका छौ । न त छोड्न सकेका छौ न त सम्सोधन नै । यदाकदा सम्सोधन वा कुप्रथा रोक्नु र छोड्नु पर्छ भनी सामाजिक चेतना फैलाउने कर्तालाई नै हाम्रो समाजले घ्रिणाको पात्र बनाउछन वा हतोत्साहित गर्छन् ।
वास्तवमै भन्नु पर्दा सस्कार धर्म द्वारा प्रतिपादित चलन हो l त्यसै गरि कतिपय प्रकृतिको विश्वाशको आधारमा चलाइएको एउटा चलन हो । तर मलाइ यहाँ नेर के अनौठो लाग्छ भने बिशेष गरि नेपालि समाजमा हरेकजसो भगवान, देउता, देवी देरालीलाई पशुबली चढाएरै मान्नु पर्ने कारण के ? कहाँ नेर लुकेको छ सत्याता ? पशुबली चढाउदा के फाईदा भो र फुलपातीले मात्र पुजा
गर्दा के बेफाइदा भो ? छ हामि सँग हिसाब किताब ? यी यस्ता कार्य गर्नु प्रेरित गर्ने हाम्रो समाजमा बिध्धमान धर्म नै हो । हरेक जसो हिन्दू शक्ति पिठ र मन्दिरमा भोग नै दिनु पर्ने चलन छ।त्यस्तै कथा र देवी देउताको मुर्तिले पनि हिङ्सा गर्न अभिप्रेरित गर्ने गरि बनाइएका हुन्छन् । जो धर्मले प्रसिद्द छन् ती मध्ये सायदै हिन्दू धर्मले मात्र होला पशुबली दिनु पर्छ मन्दिर र कोटमा भनी वकालत गर्ने । खोइ अरु धर्म जस्तै ख्रिस्टियन, मुस्लिम अनी बौध्ध धर्माव्लम्बीको आस्थाको केन्द्र चर्च, मस्जिद र बौध्ध स्तुपामा जाऔ न त त्यहा पशुबली चढाइएको रगतको खाटा नै देखिन्छ न त धुपधुवार र कोलाहल नै । कति सफा शान्त र आनन्दको अनुभुती हुन्छ । क्रिश्टियनिटीमा कहील्यै चर्चमै गएर पशुबली चढाउनु पर्छ भन्ने चलन वा सस्कार बसाएनन तेस्तै मुस्लिममा पनि । शान्तिको अग्रदुत भगवान् गौतम बुद्धले त झन हत्या हिन्सा गर्नु हुन्न भनेर संसार भारी ज्ञान फैलाउनु भो । तथ्याङ्क अनुसार् अधिकाङ्स नेपालिले अङ्गालेको हिन्दू धर्मको आस्थाको केन्द्र मन्दिरमा जाऔ जताततै भित्ताभरी रगत पोतिएको, दुनाटपरीको फोहोर डङुर थुपारिएको त्यस्तै धुपधुवारबाट निस्कने धुवा र घण्टाहरूबाट निस्कने आवाजले वातवरणमा कोलाहल मच्ची रहेको हुन्छ ।
हिजो आज त झन् दशै पर्बको महिमाले गर्दा सबै जसो हिन्दू शक्ति पिठ मन्दिरमा भक्त्जनहरू आफ्नो क्षमता अनुसारको पशु वा पन्क्षी लिएर दर्शन गर्न लावालस्कर नै छ । मलाइ यहि नेरै हाम्रो धर्म मान्ने सस्कार र पर्बको तुक देख्छु । हामिले बिजया दशमीमा रगतमै मुछिएको रातो टिका नै ग्रहण गर्नु नितान्त जरुरी छ ? अक्षताले मात्र टिका लगाउन सकिन्न र ? फूलपाती अक्षता लिएर मन्दिरमा दर्शन गर्न सकिन्न र ? यी यस्ता खाले अन्धबिस्वासबाट चलाइएका प्रथा र सस्कारलाई हामिले सम्सोधन र परिमार्जन गर्दै लानु जरुरी छ । यसरी समाजमा चेतनाको जागरण गरियो भने समाजमा बिध्धमान धर्म, बिस्वास र आस्था (जसले कुसस्कार राख्यो) को भबिस्यामा निकास र समुन्नत बिकास होला होईन भने सधैं येस्ता खाले आरोप र आक्षेप भोगी रहनु नपर्ला भन्न सकिदैन ।